isivumelwano: gcina i- $ 75 (25%) xa uthenga i-moto ye-64gb kunye ne-amazon
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Gcina i-75 $ (25%) xa uthenga i-64GB Moto G5 Plus eAmazon
Idili: Gcina i-75 $ (25%) xa uthenga i-64GB Moto G5 Plus eAmazon
IMotorola & apos; s phakathi kuluhlu lwe-smartphone ye-Android, iMoto G5 Plus yayiyinxalenye yeqela izithembiso zokwazisa iqhutywa ngabathengisi abaphambili abanjengoAmazon, Best Buy, kunye Newegg. Nangona kunjalo, imodeli engama-64GB ayinalo ixabiso layo elihla ngaphezu kwe- $ 50 kude kube namhlanje.
Ukuba ukhangele i-smartphone efanelekileyo ye-Android ephakathi, sikholelwa ukuba UMlilo G5 Plus phawula zonke iibhokisi ezifanelekileyo. Kwakhona, kangangexesha elincinci, unokufumana imodeli engama-64GB nge-225 yeedola eAmazon, oko kuthetha ukuba wena & apos; uza kugcina i-75 yeedola (iipesenti ezingama-25) kwifowuni nakwiipos MSRP.
Ngokungafaniyo nemodeli ye-32GB ebiza i-210 yeedola kwaye iza ne-2GB ye-RAM, iipakethe ezingama-64GB ezahlukileyo ze-4GB ye-RAM. Kukwafanele ukukhankanya ukuba olu luhlobo oluqhelekileyo, olungabandakanyi ukubonelelwa kweAmazon kunye neentengiso. Inguqulelo ye-Prime Exclusive ayithengiswa okwangoku, ke abathengi mabahlawule ixabiso elipheleleyo le- $ 300 ukuze bayifumane.
Ukuba uthatha isigqibo sokuya kwisivumelwano seAmazon, ke wena kunye nothi, uya konwaba ukwazi ukuba umthengisi uneGolide entle kunye neLunar Grey ezithengiswayo.
Ngaba i-32 gb ipad yanele
IPandora Plus ifika kwi-Android nakwi-iOS ngokutsiba okungenamda, imowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi
UGoogle ususa iiMidlalo zeMidlalo yeTV neMidlalo yeTV kwiqonga elikhethiweyo